.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဟဲလေး - ဝါရင့် သမ္ဘာရင့် ( Old Service ) Album
ဟဲလေးရဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဝါရင့် သမ္ဘာရင့် ( Old Service ) Album တစ်ခုလုံးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
1 စက္ကထရီ Click Here !! 1.50 MB
2 ဒဏ်ရာမဲ့ အနာ Click Here !! 1.80 MB
3 ခေတ်ကာလ သားသမီးများ Click Here !! 1.30 MB
4 ခိုနားရာ Click Here !! 1.40 MB
5 တစ်သက်စာ တစ်မျက်နှာ Click Here !! 2.00 MB
6 ဝါရင့် သမ္ဘာရင့် Click Here !! 1.00 MB
7 မင်းကို ငါချစ်တယ် (ဆာဒါငဲယိုး) Click Here !! 2.10 MB
8 နှုတ်ဆက်ညလေး Click Here !! 1.70 MB
9 အင်တာဗျူး Click Here !! 1.10 MB
10 အချစ်ဝင်္ကပါ Click Here !! 2.20 MB
11 မိသဝေထိုး Click Here !! 1.40 MB
12 ပျော်ရင်ပြီးတာပဲ Click Here !! 2.00 MB
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်က Mp3 ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။